Hetsika ho avy - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
[17 Janoary 2022] Mikaroka ny fandriampahalemana: Etnôgrafia amin'ny sekoly ambony any India Research
[15 Janoary 2022] Martin Luther King sy ny tantaran'i Montgomery - Torolàlana momba ny fandaharam-pianarana sy fandalinana (Fellowship of Reconciliation) fandaharam-pianarana
[14 Janoary 2022] Mbola mitazona ny sekoly any Irlandy Avaratra ny fizarazarana sekta Vaovao sy hevi-dehibe
[13 Janoary 2022] TAtitra momba ny fanadihadian'ny tanora: Fahalalana sy fahalianana amin'ny fanabeazana momba ny fandriampahalemana Research
[11 Janoary 2022] Antso ho fanohanana ny fampianarana ambony any Afghanistan Fanairana
Ampidiro ny Toerana. Mitadiava hetsika isaky ny toerana.
ankehitriny ankehitriny - 10 / 11 / 2022 Oktobra 11
Janoary 17 - Febroary 27
Ady sy ny tontolo iainana (Course en ligne)
Webinar / hetsika virtoaly
Mifototra amin'ny fikarohana momba ny fandriampahalemana sy ny fiarovana ara-tontolo iainana, ity fampianarana an-tserasera World BEYOND War ity dia mifantoka amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny fandrahonana roa misy: ady sy loza ara-tontolo iainana. (17 janoary - 27 febroary 2022)
21 Janoary @ 10:00 maraina - 3: 30 am est miverimberina
Sekoly fiaraha-monina maimaimpoana
Ny FuelEd Schools dia manolotra fanasana hanatevin-daharana azy ireo amin'ny fiofanana maimaim-poana amin'ny Sekoly Empathy! Ny fandaharana virtoaly 5.5 ora (anisan'izany ny fiatoana sy 30 minitra hisakafoanana) dia hotarihin'ireo mpampiofana vaovao mahafinaritra antsika. Miangavy anao hiaraka aminay amin'ny 15, 16, 21, 22, na 23 janoary manomboka amin'ny 10 ora maraina hatramin'ny 3:30 hariva CT!
22 Janoary @ 1:00 hariva - 3: 00 am est
Mpianatra manohitra ny fitaovam-piadiana nokleary: Forum virtoaly
Ity forum virtoaly 22 janoary ity dia mifantoka amin'ny fiantraikan'ny maha-olombelona amin'ny hazakazaka nokleary havaozina sy ny mety ho fiantraikan'ny Fifanarahan'ny Firenena Mikambana momba ny fandrarana ny fitaovam-piadiana nokleary hanangana tontolo tsy misy atahorana amin'ny ady nokleary. Elizabeth May sy Ray Acheson no mpandahateny fototra.
Janoary 24 miverimberina
Andro iraisam-pirenena ho an'ny fanabeazana
Ny fanabeazana dia zon'olombelona, ​​tombontsoam-bahoaka ary andraikitra ampahibemaso. Ny fivoriamben'ny firenena mikambana dia nanambara ny 24 janoary ho Andro Iraisam-pirenena ho an'ny fanabeazam-pirenena, ho fankalazana ny andraikitry ny fanabeazana ho an'ny fandriampahalemana sy ny fampandrosoana.
29 Janoary @ 5:00 maraina - 6: 30 pm est
Ampy ve ny COP26? Fandriampahalemana, Militarisma, ary Krizin'ny Toetr'andro: ampahany tsy hita
Ny Northern Friends Peace Board, ny Quaker Council for European Affairs and Quaker Peace and Social Witness dia miara-manomana hetsika virtoaly virtoaly amin'ny 29 Janoary: "Ampy ve ny COP26? Fiadanana, Militarisma, ary Krizin'ny Toetr'andro: ampahany tsy hita."
30 Janoary @ 6:00 hariva - 8: 30 am est miverimberina
Fanorenana Kolontsaina momba ny fanarenana (cours en ligne)
Ny fandaharan'asan'ny Truth Telling Project voalohany, Grassroots Reparations Campaign, dia manasa anao hisoratra anarana amin'ny andiany faha-5 ao amin'ny Building a Culture of Reparations, fampianarana an-tserasera manomboka ny 30 Janoary.
Febroary 20 miverimberina
Andro manerantany ho an'ny fitsarana sosialy
Tamin'ny 26 Novambra 2007, nanambara ny General Assembly fa, manomboka amin'ny fivoriana fahatelo amby enimpolo an'ny General Assembly, ny 20 Febroary dia hankalazaina isan-taona ho andro eran-tany ho an'ny fitsarana sosialy.
Marsa 4 - Marsa 6
Herim-po misaina: Fialan'ny lehilahy
Mercy Center Auburn 535 Sacramento Street, Auburn, CA
Ity fialan-tsasatra manokana ity, ny 4-6 martsa 2022, dia mandinika ny dikan'ny hoe manana herim-po amin'ny saina sy ara-pihetseham-po eo amin'ny lalan'ny fifandraisana amin'ny tenanao sy ny hafa.
Aprily 22 miverimberina
Isan-taona amin'ny 22 aprily, manamarika ny tsingerintaona nahaterahan'ny hetsika maoderina momba ny tontolo iainana tamin'ny taona 1970 ny andron'ny tany.
Jona 12 - Jona 25
Asaina ianao amin'ny fotoana iray manan-danja amin'ny fampianarana—mamolavola vahaolana tena izy amin'ireo olana lehibe indrindra eran-tany amin'ny maha mpandray anjara amin'ny Global Solutions Lab faha-18 isan-taona - 12-25 Jona 2022.
Jona 19 miverimberina
Valo ambin'ny folo: fahatsiarovana ny famaranana ny fanandevozana sy antso ho amin'ny hetsika
Ny faha-folo ambin'ny folo taonany no fahatsiarovana faran'ny firenena tamin'ny famaranana ny fanandevozana tany Etazonia. Amin'ny taona 2020, ny Hetsika ho an'ny Fiainana Mainty, miaraka amin'ireo fikambanana hafa, dia manentana ny tsirairay handray anjara amin'ny hetsika faha-XNUMX amin'ny faritra.
Andro iraisam-pirenena ho fanafoanana ny herisetra ara-nofo amin'ny fifanolanana
Ny ONU dia nanambara ny 19 Jona isan-taona ho Andro Iraisampirenena hanafoanana ny herisetra ara-nofo amin'ny fifandonana, mba hampahafantarana ny filàna atsahatra ny herisetra ara-nofo mifandraika amin'ny fifanolanana, hanomezam-boninahitra ireo niharam-boina sy ireo sisa velona tamin'ny herisetra ara-nofo manodidina ny izao tontolo izao, ary hanomezam-boninahitra ireo rehetra izay nanolotra ny ainy tamin-kerimpo ny ainy ary namoy ny ainy tamin'ny fijoroana ho famongorana ireo heloka bevava ireo.
Featured Featured Jolay 24 - Aogositra 1
IIPE México: Ivon-toerana Iraisam-pirenena momba ny Fanabeazana Fandriampahalemana 2022
Ny 2022 International Institute for Peace Education (IIPE) dia hatao any Mexico City ny 24 Jolay ka hatramin'ny 1 aogositra 2022 ary hijery ny lohahevitry ny "Miara-manenona ny Fianarana Fandriampahalemana Iraisam-pirenena."
Aogositra 6 miverimberina
Ny andron'i Hiroshima dia notandremana isan-taona tamin'ny faha-6 aogositra tamin'ny tsingerintaona nahatrarana ny baomba ataoma tao Hiroshima sy Nagasaki tamin'ny taona 1945.
Aogositra 9 miverimberina
Ny Andron'i Nagasaki dia notandremana isan-taona tamin'ny 9 aogositra tamin'ny tsingerintaonan'ny fanapoahana baomba ataoma an'i Nagasaki tamin'ny 1945.
Aogositra 12 miverimberina
Andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora
Ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny tanora dia ankalazaina isan-taona amin'ny 12 aogositra, mitondra ny olan'ny tanora eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary mankalaza ny fahafahan'ny tanora mpiara-miasa amin'ny fiaraha-monina ankehitriny.
Septambra 21 miverimberina
Isan-taona ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana dia ankalazaina manerantany amin'ny 21 septambra.
Oktobra 2 miverimberina
Andro iraisam-pirenena amin'ny tsy herisetra
Ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny tsy herisetra dia notandremana tamin'ny 2 Oktobra, fitsingerenan'ny andro nahaterahan'i Mahatma Gandhi, mpitarika ny hetsika fahaleovan-tena Indiana ary mpisava lalana ny filozofia sy ny paikadin'ny tsy herisetra.
Oktobra 5 miverimberina
Andron'ny mpampianatra manerantany
Natao isan-taona tamin'ny 5 Oktobra hatramin'ny 1994, Andro maneran-tany ho an'ny mpampianatra ho fahatsiarovana ny tsingerintaona nanekena ny 1966 ILO / UNESCO Torohevitra momba ny satan'ny mpampianatra. Ity fahazoan-dàlana ity dia mametraka fari-pitsipika mifandraika amin'ny zon'ny mpampianatra sy ny fenitra omeny ho an'ny fiomanana am-piandohana sy ny fampianarana, ny fandraisana mpiasa, ny asa ary ny fampianarana sy ny fianarana.
Oktobra 11 miverimberina